Caawa Maxaa ka cusub gudaha Soomaaliya? | Baydhabo Online
Caawa Maxaa ka cusub gudaha Soomaaliya?
Wararkii ugu dambeeyay Caawa iyo gudaha dalka Soomaaliya waxaa ka mid ah:
Goofgaduud oo Ciidamada Dowlada iyo Amisom.
Ciidanka Xoogga Dalka oo ay wehlinayan Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ayaa isaga soo baxey Deegaanka Goofgaduud, oo 30-KM u jira Magaalada Baydhabo.
Labada ciidan oo wata gaadiidka gaashaaman ee dagaalka, ayaa soo galay Magaalada Baydhabo, ka dib markii ay ka soo guureen fariisimahoodii Deegaanka Goofgaduud.
Korneel C/laahi Sheekh Maxamed Baabu-raxmaan oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay Ciidanka Dowladda iyo kuwa AMISOM in ay isaga baxeen Deegaanka, sidoo kalena ay deegaankaasi ay gudaha u galeen Shabaab.
Guri Ceel oo Caawa Xiisad ka taagan tahay.
Wararka inaga soo gaaraya Degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad colaadeed, kadib markii Askari ka tirsan Ciidamada Maamulka Ahlu sunna uu si bareer ah u dilay Qof shacab ah.
Dilkan ayaa yimid kadib markii Askariga Ahlu sunna ka tirsan iyo Qofka la dilay uu muran dhexmaray, kadiban Rasaas lagu furay Qofkii rayidka ahaa, waxaana xiisada ay caawa u dhaxeysaa Maamulka Ahlu sunna iyo dadka deegaanka, gaar ahaan Ehelada Marxuumka
Askariga dilka geystay ayaa waxaa gacanta ku dhigay Maamulka Ahlu sunna, waxaana dadka deegaanka ay ku doodayaan in Askariga la keeno goobta lagu dilay Marxuumka oo ay sheegeen in Meydka uu yaalayo ilaa laga keeno Askariga dilka fuliyay.
Sh/Dhexe: AMISOM oo Qarax lala eegtey
Wararka inaga soo gaaraya Gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegaya in meel 45-KM u jirta Degmada Mahadaay ee gobolkaasi Qarax lagula eegtay kolonyo ay la socdeen Ciidanka AMISOM.
Qaraxan ayaa la sheegay nuuciisa in uu ahaa Miinada dhulka lagu Aaso, waxaana uu qabsaday mid ka mid ah Gawaarida ay wateen Ciidanka AMISOM, sida ay sheegeen dadka Deegaanka.
Ciidanka AMISOM ee Qaraxa lala eegtay ayaa waxaa la sheegay in ay Raashiin u wadeen Ciidamo ka tirsan AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi oo saldhig ku leh Deegaanka Ceelbaraf.
War Shabaab ay ku soo qoreen Baraha ay wararkooda ku faafiyaan ayay ku sheegteen Mas’uuliyada Qaraxa Ciidanka AMISOM lagula eegtay Gobolka Shabeelaha Dhexe.